Izimpi Zenkanyezi. Izimpi Zezinkanyezi, ezaziwa emazweni ang
ⓘ Izimpi Zenkanyezi. Izimpi Zezinkanyezi, ezaziwa emazweni angamaNgisi njenge- Star Wars, futhi kamuva ezazibiza ngokuthi Izimpi Zezinkanyezi - Ukuza Okusha, kuyi ..
ⓘ Izimpi Zenkanyezi
Izimpi Zezinkanyezi, ezaziwa emazweni angamaNgisi njenge- Star Wars, futhi kamuva ezazibiza ngokuthi Izimpi Zezinkanyezi - Ukuza Okusha, kuyifilimu lesikhala esivela ngo-1977. Yize kuyifilimu yokuqala ukwenziwa ezimpini zeplanethi Yase-Star, yona ifilimu lesine ku-saga. Ababamba indawo kukhona uMark Hamill, uCarrie Fisher, uHarrison Ford no-Alec Guinness.
Le filimu ilandela iqembu lamavukelambuso elithatha inkanyezi yokufa njengoba ligijinyiswa nguDark Vader, odlalwa nguPeter Cushing. Kwaba ukushaya kwasusa wonke umbuso wezindaba, futhi kuthiwa kubaluleke kakhulu. Amafilimu amaningi enziwa kamuva.
Wikipedia: Izimpi Zenkanyezi